China iru mmiri egosi kaadị emeputa ahaziri 6-ebe iru mmiri kaadị gburugburu ebe obibi-echebe factory na-emepụta | Idocha
Iru mmiri egosi kaadị emeputa ahaziri 6-ebe iru mmiri kaadị gburugburu ebe obibi
Igwe ngosi iru mmiri bụ usoro dị mfe ma dịkwa ọnụ ala iji chọpụta iru mmiri gburugburu ebe obibi. Onye ọrụ nwere ike ikpe ngwa ngwa na ọnọdụ okpomọkụ dị na ngwugwu ngwaahịa na nsonaazụ nke agba site na agba na kaadị ahụ. Ọ bụrụ na iru mmiri nke ngwugwu ahụ dị elu karịa ma ọ bụ hara nha ihu uru iru mmiri, akara kwekọrọ na kaadị ga-agbanwe site na agba akọrọ ruo oke agba mmiri, yabụ enwere ike ịmacha ojiji nke desiccant.
Na 2004, usoro iwu nchekwa gburugburu ebe obibi nke EU (2004/73 / EC) edepụtarala cobalt oxide dị ka klaasị II nke klaasị, bụ nke kaadị cobalt iru mmiri na-amachibidoro ugbu a. Ngwaahịa niile ebuputara na mba EU ga-agbaso iwu a. Ya mere, a ga-amachibido kaadị egosipụtara iru mmiri n'ọtụtụ ebe (site na-acha anụnụ anụnụ ruo pink), ihe bụ isi bụ cobalt oxide.
Iji mezuo iwu ndị dị mkpa yana mkpa nchekwa gburugburu ebe obibi, neume Electronic Materials Co., Ltd. ewepụtala ọhụụ ọhụụ nke kaadị nchekwa ihu igwe gburugburu (ụdị I, II, III), ma bulie usoro mmepụta nke kaadị egosi. n'ọkwa dị elu. Usoro ndị a na-agbaso European Union RoHS Directive (adịghị etinye ya), agafewo ule CTI / SGS, na-egosi na mgbanwe agba ahụ doro anya, ọrụ ahụ dị mma, na iji ya adaba.
2004/37 / EC
Gjb2494-95 (ọkọlọtọ ndị agha nke ndị mmadụ Republic of China)
Mil-ib835a (nkwakọ ngwaahịa ndị agha US)
Jeoec (ọkọlọtọ kọmputa nke ụlọ ọrụ eletriki)
Nkwakọ ngwaahịa nke akụrụngwa eletriki, ngwa anya, ihe na-emetụ n'ahụ
All iche iche nke agụụ nkwakọ
IC / integrated / circuit board, wdg
Mgbe iru mmiri nke gburugburu ebe obibi ruru ma ọ bụ uru nke akara ngosi na kaadị egosi iru mmiri, akara ngosi na-agbanwe site na agba akọrọ gaa na agba hygroscopic.
Mgbe iru mmiri nke gburugburu ebe obibi na-ebelata, agba nke isi ihe na kaadị egosi ga-agbanwe site na agba hygroscopic ka ọ kpọọ agba.
Mgbe agba nke akara ngosi gbanwere na agba akọwapụtara, uru dị na isi bụ uru iru mmiri nke gburugburu ebe a.
Enwere ike ịhazi ya dịka ihe ndị ahịa chọrọ na mkpa pụrụ iche.
1. A na-emechi ngwugwu dị n'ime ya na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, na mpempe mpụga bụ katọn, 2400pcs / box / 5 can.
2. Kaadị na-egosi iru mmiri ga-emechi ka ọ bụrụ nke nwere ike iji mgbochi. Biko dochie desiccant mgbe ngwugwu meghere ugboro atọ.
3. Nọgide na-akpọnwụ ma dị jụụ na gburugburu ebe obibi, zere kpọmkwem ìhè anyanwụ na imikpu mmiri.
Nke gara aga: Threadened aluminum foil akpa ntụpọ aluminum foil agụụ akpa nwere ike ahaziri nri nkwakọ bag tii nkwakọ akpa ọcha aluminum foil akpa
Osote: Bandeeji nkpuchi igwe Manufacturer
Anti Static Afọ Cloth
Packaging Afọ akpa
Uhie Uhie Uhie
Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe, Uhie Uhie Uhie, Igwe nkpuchi ihu, Nkpuchi Manufacturer, Packaging Afọ akpa, Anti Static Afọ Cloth,